नेपालमा हिन्दु धर्मको सान्दर्भिकता - Gaule Media ::
Home/विचार/नेपालमा हिन्दु धर्मको सान्दर्भिकता
Gaule Media७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २२:०७
सनातन हिन्दु धर्म नेपालीका लागी अपरिहार्य छ। नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउन पर्छ। पूर्वीय दर्शन र धर्मप्रती बिश्वास राख्ने मानिसले आजको विषम परिस्थितिमा हिन्दु धर्मको बैज्ञानिकता बोध गरेका छन् । जस्तै घरमा तुलसी रोप्ने, बिहान सदैब नुहाउने। अझ अर्को कुरा डाक्टर र वैज्ञानिक हरुलेनि आजकल भन्ने गर्छन् कि शङ्ख बजाउने गर्नुस्। यसले तपाइको फोक्सो लाई बलियो बनाउछ। हिन्दु धर्मामा वर पिपल लाई बिष्णु भगवान् को अबतार मानिन्छ। र चौतारीमा यी रुखहरु रोपिन्थ्यो। अनि आजको बिज्ञानले पत्ता लगायो कि वर, पिलल तुलसीले धेरै अक्सिजन दिन्छ।
बास्तबमा हाम्रा ऋषि मुनी हरुले आजको बिज्ञानले पत्ता लगाएका कुरा हजारौं बर्ष पुर्बनै पत्ता लगाएका थिए। आज हाम्रो शास्त्र बेदको माध्यमबाट कतिपय पश्चिमा देशहरू धेरै अगाडि गएका छन्। अनि यस्तो पबित्र हिन्दु धर्म देशबाट हराउँदै गएको छ। दुख लाग्छ। अनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, धर्म परिवर्तन। कति पैसाको लोभमा परेर होस्, बच्चा पढाइदिने भनेर होस् वा रोग निको हुन्छ भनेर होस् नेपालमा केही समय यता धर्म परिवर्तन गर्नेक्रम दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलबाट स्थापित सरकारले धर्म निरपेक्षता भनेर घोषणा गर्‍यो । वास्तवमा के हो त धर्म निरपेक्षता ? धर्म निरपेक्षता मानिसले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउनु वा धर्ममा स्वतन्त्रता नै धर्म निरपेक्षता हो । तर, धर्म निरपेक्षता नेपालमा घोषणा नगर्दा पनि नेपालमा विभिन्न धर्म मान्ने ब्याक्ती बसेकै थिए । नेपालमा जनआन्दोलन हुँदा धर्म निरपेक्षताको नारा कहीँ कतै लागेको सुनिएको पनि थिएन । धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्न त्यतिबेलाका नेताहरूलाई अधिकार पनि थिएन । अर्कोतर्फ नेपालमा लगभग ८१ प्रतिशत मानिस हिन्दू धर्म मान्ने गर्छन् । हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई युरोपियनहरूलाई खुसी पार्न नेपाली जनताको मर्मविपरीत विश्वमा १५९ राष्ट्र धर्मसापेक्ष हँुदाहँुदै किन धर्म निरपेक्षता घोषण गरियो ?
राजनीति र धर्म एकअर्काबीच सम्बन्धित छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा २५ लाखभन्दा बढीको सभामा सपथग्रहण गर्नु पूर्व पादरी रिक वारेनले करिब पाँच मिनेटसम्म प्रार्थना गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रथम महिला मिसायल ओबामाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले प्रयोग गरेको बाइबल लिएकी थिइन् । त्यसै बाइबलमाथि बायाँ हात राखेर ओबामाले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग राष्ट्रपतिको सपथग्रहण गरेका थिए । देशको एउटा निश्चत धर्म हुन्छ, त्यसले देशलाई चिनाएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने एउटा निश्चित धर्म कुन हो ?
नेपाल विश्वका प्राचीनतम १० राष्ट्रमध्ये एक र ३५०० वर्षभन्दा बढी इतिहास बोकेको ऐतिहासिक राष्ट्र हो । विश्वमा ७१ वटा क्रिस्चियन र ५१ वटा मुस्लिम धर्म मान्ने राष्ट्र छन् । तर हिन्दू राष्ट्र छैन् । नेपाल हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । देशको अखण्डता बचाउन धर्मको ठूलो योगदान हुन्छ । धर्मले राष्ट्रियता बलियो बनाउछ । नेपालमा धर्म निरपेक्षता विदेशीको इसारामा भएको भनेर चर्चा हुनेगर्छ, त्यो के हो भावी सन्तति र इतिहासले देखाउनेछ । हामीले धेरै परको उदाहरण हेर्न आवश्यक छैन भारतकै उदाहरण लिन सक्छौँ भारत धर्म निरपेक्षता भएकै कारण विभाजन भयो । यसलाई रोक्न गान्धी, नेहरू आदिले पनि सकेनन् । भारत पनि विदेशीको इसारामा धर्म निरपेक्षता भएको हुँदा अहिले पनि विभाजनकारी शक्तिले भारतमा धार्मिक बखेडा झिकिरहेका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा आएर नेपालीहरूले धर्म परिवर्तन गर्दै आइरहेका छन् । सदिऔँदेखि हाम्रा बाबुबाजेले मान्दै आएको पवित्र हिन्दू धर्म हो । इसुख्रिट पनि त हिन्दू धर्मकै वंशज हुन् । यो किन बुझिरहेका छैनन् । धर्म परिवर्तन गराउने र धर्म प्रचारकहरूले मानव विकासको इतिहास हेर्न आवश्यक छ । प्रारम्भमा हिन्दू धर्मबाहेक अरू कुनै धर्म थिएन । हाम्रा बाजेबराजुले पाञ्चायन धर्म मान्ने गर्थे । पाञ्चायन धर्म अन्तर्गत गणेश, शिव, विष्णु, देवी र सूर्यको पूजा हुन्छ । हाम्रा पुर्खाले यिनै देवीदेवताको पूजा गरे । आज आएर हामी यिनै देवीदेवता ठीक होइनन् भनेर अर्को धर्म मान्नु राम्रो होइन । पुराना मठमन्दिरहरूले पनि यी कुरा प्रस्ट पार्छन् कि हिन्दू धर्म नै मानव सभ्यताको पहिलो धर्म हो ।
आज आएर नेपालीलाई मन नपर्दा नपर्दै हाम्रो घर आँगनमा धर्म परिवर्तन गर्न आह्वान भएको छ । आह्वान मात्र नभएर दिग्दारिपूर्ण तरिकाले सताउने गरेको पनि पाइन्छ । धर्म लिनु नलिनु भनेको मानवको अधिकार हो । हाम्रो घर, पसल, पाटी, पौवा आदि ठाउँमा मानिसको के मुढ हुन्छ हाम्रो चर्चमा आउनुहोस् भनेर मानिसलाई पट्यार लगाउनु नितान्त सही होइन ।
यूुोपका तथाकथित धार्मिक व्यापारीले अफ्रिकामा गएर गाउँनै घेरा हालेर हतियारका बलमा धर्मान्तरण गराउने, दास बनाउने र असहमत हुने जातिलाई समुद्रमा फ्याँक्ने दुष्कर्ममय अपराध गर्थे । सन् १०९५ देखि ९९ सम्म युरोपका इसाई राजाहरू र पश्चिमी एसियाका तुकहरूबीच धर्मयुद्ध चर्कियो । इरानीहरूले तुर्कीहरूलाई पराजित गरी जेरुसेलमा अधिकार जमाय । मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लको समयमा तिब्बततिरबाट नेपाल आई दुरविनलगायत विभिन्न उपहार दिई धर्म प्रचार गर्न बसेका पादरीलाई पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजयपश्चात् देश निकाला गरे । नेपाल पनि धर्मयुद्धकै खतरामा छ । आफ्नो धर्मसंस्कृति रक्षाका लागि विश्वमा कैयौँ युद्ध भएका छन् । त्यसैको प्रारूप त नेपालमा धर्मान्तरण गराउन खोजिएको होइन ? नेपालमा भइरहेको कार्यले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । त्यस्तो हो भने जसले त्यस्तो दुष्प्रयास गरेको छ त्यो बिल्कुलै सही छैन् ।
धर्म परिवर्तन अपराध हो, अवैज्ञानिक हो । धर्मको अध्ययनमा र उपासनामा स्वतन्त्रता चाहिन्छ । अध्ययन गर्दैमा केही फरक पर्दैन । स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गान्धी आदिले बाइबल अध्ययन गरेका यिए तर इसाई भएका थिएनन् । हाम्रो हिन्दू धर्मग्रन्थ वेद, पुराण, महाभारत, गीता, श्रीमद्भागवत, गरुडपुराण आदि नेपालीको हो । नेपालमा विभिन्न वेद र पुराणहरू छन् । तिनै वेद र पुराण नै हाम्रो देशको पुरानो नेपाली ग्रन्थ हो ।त्यो नै जनमानसमा पुर्‍याउनुपर्छ । वास्तवमा धर्मको संरक्षण हामीले नै गर्नुपर्छ । गीतामा उल्लेख भएको छ । ‘स्वधर्म निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: । (परधर्म आगाल्नुभन्दा स्वधर्मका लागि बलिदान दिनु श्रेयष्कर हो, परधर्म भयावह हुन्छ) । हामीले पनि गीताको उपदेशलाई मनन गरी लाग्ने बेला भएको छ ।